Myanmar Muslims must do self-improvement in all the fields | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Avoid Religious fanaticism to gain mutual trust and respect
က်ေနာ္သိခဲ့တဲ့ ကိုထြန္းေအာင္ေက်ာ္ »
Myanmar Muslims must do self-improvement in all the fields
Myanmar Muslims must do self-improvement to have all round strength and power
Eating nutritious foods, avoid cigarettes, liquor and drugs. Avoid dangerous sexual behaviors.
Learn Martial arts for self defense and if getachance try to learn by participating in civil defense and military training.
power of good track record,
This entry was posted on January 17, 2012 at 3:48 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
2 Responses to “Myanmar Muslims must do self-improvement in all the fields”
April 8, 2017 at 3:46 am | Reply
Swe Mon was feeling ျဖစ္​​ေစခ်င္​တာပါ.
ရန္​ကုန္​ မႏၱ​ေလးစတဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးတိုင္​းရဲ႕ ALL D ထြက္​တဲ့ ၁၀ တန္​း​ေက်ာင္​းသား၊ Top 10 list ထဲက ​ေက်ာင္​းသူ​ေလး​ေတြထဲမွာ မြတ္​စ္​လင္​မ္​​ေက်ာင္​းသား​ေက်ာင္​းသူအမ်ားစု ျဖစ္​​ေနရင္​ …
ႏွစ္​စဥ္​ႏွစ္​တိုင္​းမွာ ​ေဆးတကၠသိုလ္​၀င္​ခြင္​့ရ ​ေက်ာင္​းသူ​ေက်ာင္​းသား​ေတြရဲ႕ ၇၀ %​ေက်ာ္​ဟာ မြတ္​စ္​လင္​မ္​​ေတြ ျဖစ္​​ေနရင္​…
ကြန္​ပ်ဴတာတကၠသိုလ္​​ေက်ာင္​းတက္​​ေနဆဲ ​ေက်ာင္​းသား​ေက်ာင္​းသူ​ေတြရဲ႕ ၈၀% ​ေက်ာ္​ဟာ မြတ္​စ္​လင္​မ္​​ေက်ာင္​းသား​ေက်ာင္​းသူ​ေတြျဖစ္​​ေနရင္​ …
ျမန္​မာႏိုင္​ငံကို အမွန္​တကယ္​အက်ဳိးျပဳ​ေနတဲ့ ဆရာ၀န္​ အင္​ဂ်င္​နီယာ စာရင္​းကိုင္​ အမ်ားစုဟာ မြတ္​စ္​လင္​မ္​​ေတြျဖစ္​​ေနရင္​ …
အားကစားက႑၊ ကိုယ္​ခံပညာ၊ ​ေဘာလံုး၊ လက္​​ေ၀ွ႕က​ေနစၿပီး က႑တိုင္​းမွာ မြတ္​စ္​လင္​မ္​မ်က္​ႏွာ​ေတြ မ်ားလာရင္​ …
​ေနာက္​ဆံုးအဆင္​့ ျမန္​မာ့တပ္​မ​ေတာ္​အတြက္​ သု​ေတသန Research Team member list ထဲမွာ မျဖစ္​မ​ေန ​ေခၚကို ​ေခၚယူအၾကံယူ​ေနရတဲ့ R & D Researchers ​ေတြထဲမွာ မြတ္​စ္​လင္​မ္​​ပညာ႐ွင္​​ေတြ မပါမျဖစ္​ပါ​ေနရတဲ့ အဆင္​့တစ္​ခုကို ႀကိဳးစားႏိုင္​ခဲ့ရင္​ …
ခင္​ဗ်ားတို႔ ကြၽန္​​ေတာ္​တို႔ ဘာပဲ ၀တ္​၀တ္​၊ ဦးထုတ္​ပဲ​ေဆာင္​း​ေဆာင္​း၊ မုတ္​ဆိတ္​ပဲထားထား၊ ကြၽန္​​ေတာ္​တို႔ကို ႏိွပ္​ကြပ္​ရဲတဲ့၊ ကုလားလို႔ ​ေခၚရဲတဲ့၊ လက္​ညွိဳးထိုးရဲတဲ့လူ အလိုအ​ေလ်ာက္​ ​ေပ်ာက္​သြားလိမ္​့မယ္​။
ကြန္​ျမဴနတီတစ္​ခုရဲ႕ ပံုရိပ္​ကို ျမႇင္​့တင္​​ေပးႏိုင္​တာ “ပညာ” သီးသန္႔ပါပဲ။ လူတိုင္​းကို အထင္​ႀကီး​ေစတာ၊ ပြဲလယ္​တင္​့​ေစတာကလည္​း လူတိုင္​းမတတ္​​ေသးတဲ့ “ပညာ” ကို တတ္​ထားျခင္​းပါပဲ။
ဘာသာ​ေရးပညာနဲ႔အတူ ​ေခတ္​ပညာကို ယွဥ္​တြဲ​ေလ့လာကာ ​ေခတ္​ပညာကို ထိုး​ေဖာက္​ထြက္​ႏိုင္​သူ​ေတြ မ်ားလာ​ေလ​ေလ၊ ႏိုင္​ငံ့ဂုဏ္​ကို ​ေဆာင္​ႏိုင္​တဲ့ မြတ္​စ္​လင္​မ္​မ်ားလာ​ေလ​ေလ …. အဲဒီကြန္​ျမဴနတီအသိုင္​းအ၀ိုင္​းရဲ႕ ဂုဏ္​႐ွိန္​ဟာ ျမင္​့တက္​လာ​ေလ​ေလပါပဲ။
ႏိုင္​ငံအတြက္​ တကယ္​အသံုးက်တဲ့လူ​ေတြအတြက္​ ဘာလုပ္​လုပ္​ အရာထင္​ပါတယ္​။ ႏိုင္​ငံကလည္​း ကိုယ္​့ကို တန္​ဖိုးထားမွာ ျဖစ္​သလို ႏိုင္​ငံ့အတြက္​လည္​း ကိုယ္​ဟာ အသံုး၀င္​​ေနသူတစ္​ဦးျဖစ္​​ေနမွာပါပဲ။
​ေခတ္​ပညာ + ဘာသာ​ေရးပညာ တြဲၾကပါ။
November 17, 2021 at 9:32 am | Reply
ကိုယ်က Life ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ပဲ့တင်သံလို့ ရိုးရိုးလေးသတ်မှတ် ထားတယ် ဘဝမှာ ကိုယ် လုပ်ခဲ့သမျှတွေက ကိုယ့်ဆီပဲ့တင်သံ ပေး ပြန်လာတတ်လို့ပါ။
အဓိပ္ပာယ် လေးဟာ တိုတိုနဲ့ ရိုးရှင်တယ် but real life ဟာ အလွန် ရှုပ်ထွေးတယ် ကြိုးစားခဲ့ရတယ် အလဲအကွဲ ပင်ပင်ပမ်းပမ်း ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်..ဖြတ်သန်း ခဲ့ရတဲ့ဘဝ အချိန်ဟာ မနေ့တနေ့ကလိုထင်ရပေမယ့်..နောက်လှဲ့မကြည့်စတမ်း
ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း တဆင့်ချင် တက်လှမ်းခဲ့ရတယ်။
ဒီနေ့ မြင့်မားတဲ့ ဘဝအခြေအနေရရှိ ပိုင်ဆိုင် ထားသူတိုင်းရဲ့ နောက်ကြောင်း ကို မေးကြည့်ပါ ဘယ်သူမှ့ အလွယ်မရခ့ြဲကဘူး တချိန်က အလဲအကွဲ ရုန်းကန် ကြိုးစားခဲ့ရလို့ဗျ့ ဘာတခု့မှ့ အလွယ်မရခဲ့ဖူးသူတွေချည်းပါ ကိုယ်တိုင် စနစ်တကျ တည်ဆောက် ကိုယ်တိုင်ရယူခဲ့ရသူတွေ။
အောင်မြင်ခြင်း ကျရှုံးခြင်း ခဏ ခေါင်းထဲကမေ့ထားဘာပဲ လုပ်လုပ် တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ဗျ့ လုပ်တဲ့ အလုပ်အပေါ် ဝတ္တရား ကျေ ဘယ်တော့ မှ့မလုပ်ရဘူးစိတ် ရင်းနဲ့လုပ်. လုပ်တဲ့အလုပ်အပေါ်သစ္စာ ရှိ ဟိုခုန် ဒီပြောင်း ခဏခဏ မလုပ်ရဘူး စိတ်ရှည် သီးခံ ဦးတည်ချက် ရည်မှန်း ချက်ပန်းတိုင် အပေါ် အရိုးသားဆုံး လျှောက်လှမ်း ခိုင်မာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် အတိုင်း မယိုင်လဲစေနဲ့ အရရုန်း ဖောက်ထွက် ဘယ်သူ့ လောင်းရိပ်မှ့ မမိစေနဲ့..မှားတဲ့ အမှားတွေထဲကနေ သင်ခန်းစာယူ အမှားပြင်ဆင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပြစ်မတင်နဲ့ မှားမှ့ အမှန်မြင် ဘဝကို ပြင်ဆင် နိုင်လို့ပါ မမှားဘူးတဲ့သူဟာ ဘယ်တော့မှ့ အမှန်မမြင်နိုင်ဘူး။
လွယ်လွယ် အထင်ကြီး မစောနဲ့ အထင်သေး မမြန်နဲ့ ဘယ်အရာကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် နှလုံးသားနဲ့ နားထောင် ဦးနှောက်နဲြ့ကည့်။
ဘာသာတရားတွေ ကိုသက်ဝင်ယုြံကည် ပြီးမြတ်နိုးတန်ဖိုးထားသလိုကိုယ့်အမည်ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကျင့်တရားကိုမြတ်နိုးလေးစားတန်ဖိုးထား.သေးသေးလေးတောင်မလိမ်နဲ့မညာနဲ့။
လွယ်လွယ် ဂတိမပေးနဲ့ လွယ်လွယ်ဘယ်သူ့မှ့ မယုံနဲ့ များများ နားထောင် ကိုယ့်ကို ကိုယ် ဘောင်းခတ် ပိတ်လှောင်မထားနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ ဆုံးဖြတ် စာဖတ်မပျင်းနဲ့ ပညာလို အိုသည် ပျိုသည် မရှိ။
အလွယ်မချေငှားနဲ့ ငွေအကြွေ ပြားစေ့ လေးကစ တန်ဖိုးထား အမြင်အားဖြင့် ပြားစေ့ လေးဖြစ်ပေမယ့် ဒြီပားစေ့လေးထဲမှာ ကိုယ့်တန်ဖိုးတွေအများကြီးပါဝင်တယ်။
ကူညီသင့် ကူညီ ထိုက်သူကို အပြတ်ကူညီ ပြီးရင် တခွန်းမှ့မဟနဲ့ လုံးဝမေ့ဖျောက်ပစ်။
သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ ကိူ ချစ်ရင် ပိုက်ဆံမချေနဲ့ ဖေးကာကူ ဝေးကာမျှ ။
သံသယာ အကျိုး ညောင်ပင် ညောင်သီး ဘလာဘလာ ပေးပြီရင် ဘာမှ့ ပြန်မလိုချင်နဲ့ ခေါက်ထား။
ဘာမှ့ မရှိဘူးလား ”ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်” တခု့ပဲထား။
အင်း… ဘဝဆိုတာနက်ပတ်သက်ဘီ ပထမက စိတ်ဖောက်ပြီ ပေါက်ကရ ရေးဘို့😁 ဗရမ်းဗတာ နက် ပေါက်ကရ မွှေတာတွေများဘီ မျောက်စိ့နောက်သူရဲ့လပို့စာမိအူးမယ်…အဟေ😁
IT, ET ခေတ်ကြီးမှာ IQ မြင့်မားတဲ့ကိုယ့်ညီလေး နှမလေးများဟာ ကိုယ်တို့ ထက် ပိုတော်ကြတယ် နည်းနည်းလေးတည့်ပေးရုံနဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ် လျှောက်မယ့်သူတွေပါ။
ဘာသာ စကားတွေ လေ့လာသင်ယူထားတာကလည်းမမှားဘူး အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်ပေါ့ အရေးအဖတ် အပြော စနစ်တကျ လေ့လာသင်ယူထားတာမမှားဘူး အင်္ဂလိပ် စာမှာ ရိုးရိုး နဲ့ ရုံးသုံး အင်္ဂလိပ်ဆိုတာ ရှိတယ်
ရုံးသုံးစာ ရေးနည်း သတင်းဘာသာပြန်မျိုးထိ တတ်ထားကြစေချင်တာပါပဲ..ငါတို့တိုင်းပြည်က,ကလေးတွေဟာ မညံ့ဘူး ပျက်နေတဲ့ တိုင်းပြည် ထဲနေရပေမယ့် ဦးနှောက်နဲ့ နှလုံးသားကိူ ဓားတလက်လို သွေးထား။
တော်ပြီ မကောင်းရင် အလကား ကောင်းပြီ မတော်ပြန်ရင်လည်း သုံးစားမရဘူး တချို့တွေက လူတော်ပေမယ့် လူကောင်း မဟုတ်ဘူး တချိုြ့ကတော့ လူကောင်း လူတော်ဖြစ် ပေမယ့် မူလျော်ပြန်ရော၊ ဒီ.အချက်လေး ကိူလည်း ဘဝမှာအသေအချာ သတိထားသင့်တယ်။
ဒါတွေ ဟာ နရှား
ခံယူချက်နဲ့နရှားလက်ရှိ ဖြတ်သန်း လျှောက်လှမ်းနေတဲ့ Real life အစစ်ပဲ ဘဝဆိုတာ ပဲ့တင်သံတဲ့ဒါပါပဲဗျာ။